पार्टी एकताका लागि माधब नेपालले कसरी झुकाए ओली र प्रचण्डलाई ? यस्तो छ भित्री कुरा……. – Setosurya
एमाले र माओवादीबीच बढेको दूरी अचानक कम हुँदै गएको देखिएको छ । नाटकीय रूपमा घटनाक्रमहरू विकसित भएनन् भने यसै साता एमाले र माओवादीबीच एकताको कोर्स पूरा हुन सक्छ ।
एकताको तयारीकै लागि आज प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ संवाद पनि भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपूर्व नै पार्टी एकताको कोसिस भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै एकताका लागि गृहकार्य भएको छ । छलफल जारी छ र सम्भावना पनि छ ।’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने । बाहिर आए जस्तो दुई पार्टीबीचमा विवाद थिएन । पार्टी एकताका लागि हाम्रा सबै तयारी पूरा भएका छन् । यही हप्ता पार्टी एकता हुने सम्भावना धेरै छ, नेता श्रेष्ठले भने ।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकीकृत पार्टी बनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सहमतिमा पुगेको दाबी गरिएको छ । ‘यसअघि विवादमा रहेका विषयहरूबारे एमाले र माओवादी शीर्षनेताबीच सहमति भएअनुसार आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गराउने र त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।’ कार्यदलमा बसेर काम गरेका एक नेताले भने । आज साँझ वा भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको छ ।
एमालेले एकताका विषयमा छलफल गर्न आज चार बजे नै स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । चार बजे एमाले स्थायी समिति बैठक बालुवाटारमा बस्दैछ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले एक कार्यक्रममा एकताका विषयमा जानकारी लिन पत्रकारलाई आज चार बजे बालुवाटार आउन भनेका थिए ।
ओलीले त्यहाँ ‘अन्य तयारी बाँकी नरहेकाले चुनावमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार निकट भविष्यमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता हुने’ बताएका थिए । आफूहरूको एकता भाँड्न खोज्नेहरूलाई जवाफ दिँदै कुनै पनि दिन एकता हुन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीमा रहन आह्वान गरेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा ओलीले एकतापछि समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेर दुनियाँलाई देखाउने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी घोषणापत्रअनुसार समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज अनुकूल संयुक्त नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सरकार रहेको पनि बताएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छिट्टै पार्टी एकता गरेर समृद्धि र स्थायित्वको अभियान दिशामा मुलुकलाई लगिने बताएका थिए । मङ्गलबार नै एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता चाँडो गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा दुई नेताबीच भएको छलफलका क्रममा छिटोभन्दा छिटो एकता संयोजन समिति बैठक राखेर रोकिएको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका थिए ।
ओली–प्रचण्ड अचानक नजिक देखिएका भए पनि यसअघि एकताका लागि विवादमा रहेका भनिएका विषय कसरी टुङ्गिए भन्नेबारे नेताहरूले स्पष्ट पारेका छैनन् । तर ओली–प्रचण्डबीचको दूरी कम गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले नियमित प्रयास कामय राखेका थिए, जसले पालैपालो ओली र प्रचण्डलाई भेटेर दुई नेताबीच रहेको अविश्वास हटाउन भूमिका खेलेका थिए ।
तीन विवादित विषयमध्य जनयुद्ध भन्ने शब्द विधानको प्रस्तावनामा राख्ने, प्रतिशतका आधारमा नभई बराबरीको सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रीय समिति बनाउने, आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेजस्ता विषयमा अझै लिखित सहमति चाहिँ बनेको छैन । यद्यपि सबै कुरा मिलिसकेको नेताहरूको दाबी छ ।
पछिल्लो पटक वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने भनिए पनि टरेको थियो । त्यसपछि नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि एकता थप भाँडिएको सन्देश नजाओस् भनेर दुवै पार्टीका नेताहरूले एकतामा जोड दिएका छन् । मोदी दुई दिने भ्रमण सकेर फर्केपछि दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली प्रचण्डबीच एकताका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । सकेसम्म जेठ ६ मा एकता गर्ने ओली र प्रचण्डको सोच छ । नेताहरूले अब पार्टी एकतामा सप्र्राइज दिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको एक ट्विटले ओली र प्रचण्डबीच देखिने गरी दूरी बढेको थियो । वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हामी विकास र सवृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखापर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यदेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’ भन्ने ट्विट गरेका थिए ।
उक्त ट्विट आफूलक्षित रहेको प्रचण्डको बुझाइ थियो । प्रचण्डले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तीन चरणसम्म भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले ट्विटरमार्फत प्रचण्डलाई लक्षित गर ट्विट लेखेका थिए । यद्यपि यस्तो भेट भट्टराई र यादवसँग ओलीले पनि गरेका थिए । मङ्गलबार मात्रै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले मङ्गलबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता श्रेष्ठले फोरमलाई चाँडै सरकारमा सहभागी गराइने जानकारी दिएका थिए ।
सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको एकल कार्यशैली देखिएको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले प्रचण्डसँग गुनासो गरेका थिए । यसले पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच दूरी देखिएको थियो ।
अपराध गरे पनि सांसदलाई जेल हाल्न नपाईने भन्दै कांग्रेसले थाल्यो संसद अवरुद्धको तयारी,यस्तो छ कानुन
समृद्धी पथमा लम्किँदै पर्वतको फलेवास नगरपालिका, सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता……..
फलेबास नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका पदमपाणी शर्मा बिजयी
स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको सेवासुविधा यस्तो हुनेछ
कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा उत्तरी नाका
पर्वतको कुर्घामा आगलागी ६ लाख बढिको क्षती
भरतपुरमा पुन मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय (बिज्ञप्ति सहित)
यसरी छान्यो कांग्रेसले समानुपातिक सूची ! हेर्नुहोस को को पर्दै छन्
यी हुन् पर्वतको फलेबास नगरपालिकामा उम्मेदवारका दाबेदार नेताहरु
पार्टी एकताको विषयमा ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया :
मधेसी मोर्चालाई ओलीको प्रश्नः राजनीति गर्ने कि गुण्डागर्दी ? ‘एमाले पिठ्यूँ फर्काएर भाग्दैन’
पोखरा बागलुङ सडक दैनिक ६ घण्टा बन्द हुने, यस्तो छ समय तालिका !
रोजगार चाहियो ? यसो गर्नुहोस्
मुस्ताङमा पहिलो पटक १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कागबेनी–मुक्तिनाथ जाने तिर्थालुलाई सहज
प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई अहंकारी भनेपछि बालुवाटारमा बबाल
सत्ताको दुरुपयोग गरि आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै एमालेले दियो निर्वाचन आयोगलाई यस्तो चेतावनी
प्राबिधिक शिक्षा सन्चालनको लागी जन्मदिनमा वडाध्यक्ष ठकुरीले गरे अक्षयकोष खडा
पार्टी एकिरणको विषयमा पर्वत पुगेर प्रचण्डले दिए यस्तो अभिव्यक्ति…….
ढुंगा-गिटी विवाद अदालतसम्म
फोहरबाट ग्यास निकाल्न सुरु, चौध किलोवाट बिजुली उत्पादन